Vaovao - Fantatrao ve ny fitsipika mifehy ny fandidiana tokony hatao ao amin'ny fanodinana patch PCBA?
Omeo fahalalana vaovao PCBA! Tongava mijery!
PCBA dia ny fizotry ny famokarana solaitrabe PCB amin'ny alàlan'ny SMT aloha ary avy eo atsoboka ny plug-in, izay misy fantson-dàlana marobe sy sarotra ary singa saro-pady. Raha tsy voarindra ny fandidiana dia hiteraka fahasimbana amin'ny fizotrana na fanimbana singa, fiantraikany amin'ny kalitaon'ny vokatra ary hampiakatra ny vidin'ny fanodinana. Noho izany, amin'ny fanodinana chip PCBA, mila manaraka ny lalàna mifehy mifandraika amin'izany isika ary miasa araka ny fepetra takiana. Ity manaraka ity dia fampidirana.
Fitsipika fiasa amin'ny fanodinana patch PCBA:
1. Tsy tokony hisy sakafo na zava-pisotro any amin'ny faritra miasa amin'ny PCBA. Voarara ny fifohana sigara. Tsy misy sundries raha tsy ilaina amin'ny asa tokony hapetraka. Ny workbench dia tokony hadio foana sy madio.
2. Amin'ny fanodinana puce PCBA, ny etona azo atsofoka dia tsy azo alaina amin'ny tanana na rantsantanana miboridana, satria ny menaka nafenin'ny tànana dia hampihena ny fitombenana ary hitarika mora amin'ny lesoka.
3. Ahenao farafahakeliny ny dingana fiasan'ny PCBA sy ny singa, mba hisorohana ny loza. Any amin'ny faritra fivoriambe izay tsy tokony hampiasana fonon-tanana, ny fonon-tànana maloto dia mety miteraka fahalotoana, noho izany dia ilaina ny fanoloana fonon-tànana matetika.
4. Aza mampiasa menaka miaro amin'ny hoditra na fanafody fanasan-damba izay misy resin silikôlôma, izay mety hiteraka olana amin'ny fahamendrehana sy ny firaiketam-po. Misy detergent voaomana manokana ho an'ny fantson PCBA.
5. Ny singa saro-pady an'ny EOS / ESD ary PCBA dia tsy maintsy ampahafantarina miaraka amin'ny marika EOS / ESD ilaina hialana amin'ny fifangaroana amin'ny singa hafa. Ankoatr'izay, mba hisorohana ny ESD sy ny EOS tsy hanimba ny singa mora tohina, ny asa rehetra, ny fanangonana ary ny fitsapana dia tsy maintsy vitaina amin'ny toeram-piasana afaka mifehy ny herinaratra mijanona.
6. Hamarino matetika ny latabatra EOS / ESD hahazoana antoka fa miasa tsara izy ireo (anti-static). Ny karazana atahorana ny singa EOS / ESD rehetra dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny fomba fanenenana diso na oksizenina amin'ny ampahany fifandraisana. Noho izany, ny fiarovana manokana dia tokony omena amin'ny fiarahana amin'ny terminal fanenan'ny "vata fahatelo".
7. Fady ny manangona PCBA, izay hiteraka fahasimbana ara-batana. Ny fononteny manokana dia omena amin'ny tarehy miasa ny fiangonana ary apetraka arakaraka ny karazany.
Mba hahazoana antoka ny kalitao farany momba ny vokatra, mampihena ny fahasimbana ireo singa ary mampihena ny vidiny, ilaina ny mankatò hentitra an'ireo fitsipiky ny fandidiana ireo ary miasa tsara amin'ny fanodinana chip PC PCBA.
Tonga eto ny editor. Azonao ve izany?